बैंक भन्दा धेरै राम्रो व्यवसाय हो बीमा : निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेल | Khabar Express Tv
बैंक भन्दा धेरै राम्रो व्यवसाय हो बीमा : निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेल
खबर एक्सप्रेस २०७५-०५-११ ११:०० मा प्रकाशित Total Shares: 980
इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेलसँग खबर एक्सप्रेस टिभी डटकमका संवाददाताले लिएको अन्तर्वार्ता :
बीमा समितिको ध्यान केमा केन्द्रित छ अहिले ?
बीमा समितिले तीन–चार ओटा कुरामा ध्यान दिइरहेको छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समिति भएकाले सुुपरीवेक्षण र निरीक्षणको काम भइरहेको छ । यो अर्धन्यायिक निकास भएकाले विमकहरुको पहिलो अदालत पनि हो बीमा समिति बीमा दाबीको यहाँ उजुरी पर्छ । आएका उजुरीहरुको पनि छिनोफानो गर्छ र अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको बीमाको दायरा बढाउनका लागि प्रचार प्रसारको काम पनि भइरहेको छ । लाइसेनिङको काम पनि याहीबाट हुन्छ, लाइसेन्सको काम करिब करिब भइसकेको छ । बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन काम भइरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुमा धेरै समस्याहरु छन् भन्ने सुनिन्छ, कस्तो–कस्तो समस्या देख्नु भएको छ ?
हो ! बीमा कम्पनीहरुमा समस्या छ । जहाँ पनि आ–आफ्नो समस्या हुन्छ । पहिलो भनेको मेनपावरको समस्या देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्न प्रस्तावित आइटिआई तालिम इन्स्टिच्यूट पनि खोलेका छौं । त्यो मेनपावरलाई त्यहाँ होस् भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौं । स्किल मेनपावर कम भएकोे हुनाले केही समस्या हुन्छ । बीमा यस्तो चीज हो, जुन बैंक भन्दा फरक छ । यसमा प्राविधिक कुरा पनि छन् त्यसकारण फरक तरीकाले काम गर्नुपर्छ । डाक्टरको काम पनि गर्नुपर्ने, इन्जिनियरको काम पनि गर्नुपर्नै तथा सबै खालको काम बीमासँग गाँसिएको हुनाले बीमा कम्पनीहरुमा अलि अलि समस्या देखिन्छ । दक्ष जनशक्तिको कमीले हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
नियम अनुसार दिनु पर्ने रकम बीमा कम्पनीहरुले दिदैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ नि ?
तपाइले भन्नुभएको दाबी सम्बन्धी कुरा होला बीमा कम्पनीहरुले दाबी रकम दिन अलि ढिला गरे भन्ने गुनासो हामीकहाँ पनि आउँछ । दाबी भन्ने चीज कस्तो हो भने जब घटना घट्छ, घटना घटेको ठाउँमा सर्वेरहरु पठाउनुपर्छ । त्यसले आफ्नो टाइम दिन्छ, त्यसपछि सर्वेरले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दाबी रमक हुुनुपर्छ । बीमा ऐनले पनि तोकेको छ ३५ दिनभित्र रकम दिनुपर्छ तर व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ हुन्छ सबै कागजात नहुने घटना घटेपछि, पीडितहरु कागजात बटुल्नु भन्दा पहिला परिवार समाल्नु पर्याे अनिमात्र कागजात बटुल्नु पर्याे । यी आदि इत्यादि कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भएको हो ।
तर पनि दाबी रकम तिर्न हाम्रा बीमा कम्पनीहरु अग्रसर छन् । २०७२ मा भूकम्प आयो, भूकम्पमा भएको क्षतिहरुको ९८ प्रतिशत दाबी भुक्तानी भएको छ जति बीमा कम्पनीहरुले दाबी तिर्छन् , अनि बजारको पनि व्यवस्थापन आफैं हुन्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीहरुले दाबी तिर्न ढिला गर्ने हैन छिटो तिरेर उत्साहित बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
बीमा समितिले इन्स्योरेनस कम्पनीहरुलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न नसकेको भन्न मिल्दैन, हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं नौ–दश ओटा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्याे हामी इस्यू बेसमा मात्र निरीक्षण गर्याै भने गत वर्ष बीमाको शाखामा समेत गएर अनुगमन गरेका छौं ।
अहिले सम्म तपाइहरुले अनुगमन गरेर वा सूचनाको आधारमा नियम विपरित काम गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने भएको छ ?
बीमा कम्पनीको काम कारबाहीमा मात्र गर्ने हैन फ्यासिलेटर पनि हो । स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही पनि गरेका छौं । फ्यासिलेटर पनि भएकाले बीमा कम्पनीहरुलाई सहज पनि गराएका छौं, सुधारदै पनि ल्याएका छौ, अहिले सुध्रेको पनि छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा बीमाको कस्तो भूमिका छ ?
आर्थिक विकासमा हेर्ने हो भने बैंकिङ व्यवसाय भन्दा बीमा व्यवसाय धेरै राम्रो छ । हाम्रो जीडीपीमा करिब–करिब दुई प्रतिशत सहयोग गरिसकेको छ ।